सेयर बजारमा सामान्य सुधार, कसले कमाए, कसले गुमाए ? – Clickmandu
सेयर बजारमा सामान्य सुधार, कसले कमाए, कसले गुमाए ?
क्लिकमान्डु २०७६ साउन ६ गते १५:३१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सेयर बजारमा सामान्य अंकको सुधार देखिएको छ । नेप्से मापन गर्ने सूचक २.४८ अंकले बढेर १२७१.२३ बिन्दुमा रोकिएको छ । १६६ कम्पनीको १० लाख ८४ हजार ५५३ कित्ता सेयर ३१ करोड ६६ लाख ४३ हजार ४२१ रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।
११ समुहको कारोबारमा बैंकिङ २.३४, होटल १७.०९, जलविद्युत ५.७३, माइक्रोफाइनान्स समूहको उपसूचक ७.४८ बिन्दुले बढेको छ । कारोबार रकमको आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा रहेको छ । नेपाल लाइफको २ करोड ३६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । यस्तै दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः सिभिल बैंक, नबिल बैंक रहेका छन् ।
सोमबार एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था, सपोर्ट फाइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले कमाएका छन भने माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था, ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।
सेयर बजारमा देखिएन सुधार
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले ६ प्रतिशत लाभांश दिने
गरिमा विकास बैंकको १७ प्रतिशत लाभाशं पारित
सेयर बजारमा सामान्य सुुधार, कारोबार रकम आधा अर्ब नजिक